सिड्नी । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई घर फर्किन सुझाएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को सङ्क्रमणका सम्बन्धमा सरकारको कदमबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मलेनमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । विस्तृतमा
अष्ट्रेलियामा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकपटक नेपाली दुताबासलाई जानकारी दिनुहोस्
अष्ट्रेलियामा कोरोना कहर, कति पुग्यो मृतक र संक्रमितको संख्या ?
अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीले दिए प्रधानमन्त्री मोरिसनलाई यस्तो प्रतिक्रिया
सिड्नी । राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान अष्ट्रेलिया शाखामा राजीनामा लहर देखिएको छ । नेपालको लोकगीतलाई अष्ट्रेलियाको भूमिमा प्रबद्र्धन गर्ने, कलाकारहरुलाई एकताबद्ध पार्ने उद्देश्य राखेर केही समय अघि गठन गरिएको यो शाखामा राजीनामाको लहर देखिएको हो ।
अष्ट्रेलियामा प्रहरीले इलेक्ट्रिक कारले गस्ती गर्ने
सिड्नी । अष्ट्रेलियाका पुलिस हाइटेक हुने भएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार भिक्टोरिया प्रान्तमा पुलिसले इलेक्ट्रिक कारले गस्ती गर्नेछ ।
अष्ट्रेलियामा पनि कोरोना भाइरस !
सिड्नी । चीनबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस अष्ट्रेलियामा पनि देखिएको भन्दै अनुसन्धान शुरु भएको छ । न्यू साउथ वेल्स राज्यमा सम्भावित चार जना विरामीमा कोरोना भाइरसको लक्ष्यण देखिएपछि अनुसन्धान शुरु भएको हो ।
अष्ट्रेलिया जान बहिनीले गरिन् आफ्नै दाईसँग विवाह
सिड्नी । पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया जान मानिसहरु मरिहत्ते हालिरहेका छन् । विभिन्न थरी उपाय लगाएर पनि अष्ट्रेलिया पुग्ने कमी हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको छ ।
अष्ट्रेलियामा डढेलोका कारण हालसम्म ३२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट दक्षिणपश्चिमी भागमा आगो निभाउने कार्यमा खटिएको एउटा ट्याँकर बिमान बिहीबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार बिमानमा सवार चालक दलका तीन जना अमेरिकीको मृत्यु भएको छ । गतवर्ष सेप्टेम्बरमा शुरु भएको यस विनाशकारी डढेलोमा परेर कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा भएको विमान दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । एनएसडब्लु राज्यमा लागेको डढेलो नियन्त्रणको लागि उडेको आरएफएर हवाई ट्याङ्कर दुर्घटना भएको हो ।
अष्ट्रेलियामा डढेलोका कारण झण्डै ८० हजार कोओला मरे
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा लागेको डढेलोका कारण झण्डै ८० हजार कोओला मरेको अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको क्यानबेरा विमानस्थल बन्द, सिड्नीको तापक्रम ४० डिग्री
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरास्थित विमानस्थल बन्द भएको छ । बिहीबारको तापक्रम अत्यधिक भएपछि डढेलो फैलदै विमानस्थल नजिकै आएपछि उडान तथा अवतरण रद्द भएको हो ।
एनआरएनलाई खुसीको खबरः काठमाडौं नेचुरोपेथी अस्पतालमा छुटै छुट
अत्याधुनिक सुविधासहित काठमाडौँको बसुन्धरामा खुलेको काठमाडौँं नेचुरोपेथी अस्पतालले गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष छुट दिने भएको छ ।
अष्ट्रेलियाका ३० हजार घरमा विजुली अवरुद्ध
सिड्नी । मंगलबारदेखि अष्ट्रेलियाको पूर्वी भागमा आएको भीषण आँधीबेहरीका कारण करिब ३० हजार घरमा विद्युत लाइन अवरुद्ध भएको छ । मङ्गलबार बेलुका राजधानी क्यानबेरातर्फ फैलिएको सो आँधी पूर्वतिर अघि बढ्दै बेलुका साउथ न्यु साउथ वेल्स, क्वीन्सल्याण्ड र भिक्टोरियासम्म पुगेको थियो ।